Isivumelwano soMnikeli: Yintoni ekufuneka uyazi? | Law & More B.V.
Blog » Isivumelwano soMnikeli: Yintoni ekufuneka uyazi?
Isivumelwano soMnikeli: Yintoni ekufuneka uyazi?
Ngamana 5, 2021
Kukho izinto ezininzi zokuba nomntwana ngoncedo lomxhasi wesidoda, njengokufumana umnikeli ofanelekileyo okanye inkqubo yokufaka. Enye into ebalulekileyo kulo mongo ubudlelwane obusemthethweni phakathi kweqela elifuna ukukhulelwa ngokusebenzisa amadlozi, nawaphi na amaqabane, umntu onikela ngesidoda kunye nomntwana. Kuyinyani ukuba isivumelwano somnikeli asifuneki ukulawula olu lwalamano lusemthethweni. Nangona kunjalo, ubudlelwane bezomthetho phakathi kwamaqela bunzima ngokwasemthethweni. Ukuthintela ukungavisisani kwixa elizayo kunye nokubonelela ngokuqinisekileyo kuwo onke amaqela, kububulumko kuwo onke amaqela ukuba angene kwisivumelwano nabanikeli. Isivumelwano sabanikeli sikwaqinisekisa ukuba izivumelwano phakathi kwabaza kuba ngabazali kunye nabanikeli besidoda zicacile. Isivumelwano sonke sabanikeli sisivumelwano sobuqu, kodwa sisivumelwano esibalulekileyo somntu wonke, kuba ikwaqulathe izivumelwano malunga nomntwana. Ngokurekhoda ezi zivumelwano, kuya kubakho ukungavisisani okuncinci malunga nendima yomnikeli kubomi bomntwana. Ukongeza kwizibonelelo ezinokuthi zinikezwe onke amaqela, le bhlog ngokulandelelana ixoxa ukuba kubandakanya ntoni isivumelwano somnikeli, loluphi ulwazi oluchaziweyo kuyo kunye nokuba zeziphi na izivumelwano ezinokwenziwa kuzo.
Yintoni isivumelwano somnikeli?
Ikhontrakthi yomnikeli okanye isivumelwano somnikeli sisivumelwano apho kubhalwa khona izivumelwano phakathi komzali (nabazali) kunye nomnikeli wesidoda. Ukusukela ngo-2014, zimbini iindlela zokunikela ezahlukileyo eNetherlands: B kunye no-C wokupha.
B-ukunikela kuthetha ukuba umnikelo wenziwa ngumnikeli wekliniki ongaziwayo kubazali ekujongwe ukuba benziwe. Nangona kunjalo, olu hlobo lomnikeli lubhalisiwe ziiklinikhi ngeSiseko seNkxaso yabaNiki ngeDatha yokuChumisa. Ngenxa yolu bhaliso, abantwana abakhulelweyo kamva banethuba lokufumanisa imvelaphi yakhe. Nje ukuba umntwana akhulelweyo afikelele kwiminyaka elishumi elinambini, unokucela ulwazi olusisiseko malunga nolu hlobo lomnikeli. Idatha esisiseko ibhekisa, umzekelo, inkangeleko, ubuchwephesha, inqanaba losapho kunye neempawu njengoko kuchaziwe ngumnikeli ngexesha lomnikelo. Xa umntwana okhulelweyo efikelele kwiminyaka elishumi elinesithandathu, unokucela enye (enye) idatha yobuqu yolu hlobo lomnikeli.
C-isibonelelo, kwelinye icala, kuthetha ukuba ichaphazela umnikeli owaziwayo kubazali ekujoliswe kubo. Olu hlobo lomnikeli luhlala lungumntu ovela kwisangqa sabazana okanye izihlobo zabazali abaza kuba ngabazali okanye umntu othe wafumana abazali ngokwabo kwi-Intanethi, umzekelo. Olu hlobo lokugqibela lomnikeli ikwangumnikeli nezivumelwano zomnikeli zihlala ziqukunjelwa naye. Olona loncedo lolu hlobo lomnikeli kukuba abazali ekujoliswe kubo bayamazi umnikeli kwaye ke ziimpawu zakhe. Ngaphaya koko, akukho luhlu lokulinda kwaye ukungenisa ngaphakathi kunokuqhubeka ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, kubalulekile ukwenza izivumelwano ezilungileyo kakhulu kolu hlobo lomnikeli kunye nokuzirekhoda. Isivumelwano somnikeli sinokunika ingcaciso kwangaphambili kwimeko yemibuzo okanye ukungaqiniseki. Ukuba kungakhe kubekho ityala, isivumelwano esinjalo siyakubonisa ukujonga emva ukuba zithini na izivumelwano ezenziweyo zokuba abantu bavumelene omnye nomnye kwaye zeziphi iinjongo amaqela ebenazo ngexesha lokusayina isivumelwano. Ukuthintela ukungqubana kwezomthetho kunye neenkqubo zomnikeli, kuyacetyiswa ke ukuba ucele uncedo lwezomthetho kwigqwetha kwangethuba kwinkqubo yokulungiselela isivumelwano somxhasi.
Yintoni echazwe kwisivumelwano somnikeli?
Rhoqo kulandelayo kubekwa kwisivumelwano kumnikeli:
Igama neenkcukacha zedilesi yalowo unikelayo
Igama neenkcukacha zedilesi yalowo uza kuba ngumzali
Izivumelwano malunga neminikelo yesidoda efana nexesha, unxibelelwano kunye nokuphathwa
Imiba yezonyango enje ngophando ngeziphene kwilifa
Imvume yokuhlola idatha yezonyango
Naziphi na izibonelelo. Ezi zihlala ziindleko zokuhamba kunye neendleko zoviwo lonyango lomnikeli.
Amalungelo noxanduva lomnikeli.
Ukungaziwa kunye namalungelo abucala
Uxanduva lwamaqela omabini
Ezinye izibonelelo kwimeko yotshintsho kwimeko
Amalungelo asemthethweni kunye noxanduva malunga nomntwana
Xa kuziwa kumntwana okhulelweyo, umnikeli ongaziwayo uhlala engenayo indima esemthethweni. Umzekelo, umnikeli akanakunyanzelisa ukuba abe ngumzali ngokusemthethweni womntwana okhulelweyo. Oku akuyitshintshi into yokuba phantsi kweemeko ezithile kuhlala kunokwenzeka ukuba umnikeli abe ngumzali ngokusemthethweni. Ekuphela kwendlela yomnikeli kubuzali obusemthethweni kukuqonda umntwana ozelweyo. Nangona kunjalo, imvume yomntu oza kuba ngumzali iyafuneka koku. Ukuba umntwana okhulelweyo sele enabazali ababini abasemthethweni, akunakwenzeka ukuba umnikeli amkele umntwana okhulelweyo, nokuba unemvume. Amalungelo ahlukile kumnikeli owaziwayo. Kwimeko apho, umzekelo, icebo lokundwendwela kunye ne-alimony nazo zinokudlala indima. Kububulumko ke ngoko ukuba babe ngabazali ukuba baxoxe kwaye barekhode ezi zinto zilandelayo kunye nomnikeli:
Ukuba ngumzali ngokusemthethweni. Ngokuxoxa ngesi sihloko kunye nomnikeli, abo banokuba ngabazali banokuyiphepha into yokuba ekugqibeleni bamangaliswe yinto yokuba umnikeli efuna ukwamkela umntwana okhulelweyo njengowakhe kwaye ke ngoko ufuna ukuba ngumzali osemthethweni. Kubalulekile ke ngoko ukuba ubuze umnikeli kwangaphambili ukuba angathanda na ukwamkela umntwana kunye / okanye abe nelungelo lokugcina umntwana. Ukuthintela ingxoxo emva koko, kububulumko ukurekhoda ngokucacileyo oko kuxoxiwe phakathi komnikeli kunye nabazali ekujongwe kubo kwesi sivumelwano. Ngale ngqiqo, isivumelwano somnikeli sikwakhusela umzali osemthethweni wabazali abajolise kubo.
Uqhakamshelwano kunye noGcino. Le yenye yecandelo elibalulekileyo nelifanele ukuxoxwa kwangaphambili ngabo bafuna ukuba ngabazali kunye nomnikeli kwisivumelwano sabanikeli. Ngokukodwa, kunokucwangciswa ukuba kuya kubakho unxibelelwano phakathi komniki wesidoda kunye nomntwana. Ukuba kunjalo, isivumelwano somnikeli sinokuchaza iimeko eziza kwenzeka phantsi kwazo. Ngaphandle koko, oku kunokuthintela umntwana okhulelweyo ekubeni (engafunwa) ngokumangaliswa. Ukuziqhelanisa, kukho umahluko kwizivumelwano eziza kwenziwa ngabazali kunye nabaxhasi besidoda kunye. Omnye umnikeli wesidoda uya kunxibelelana nomntwana rhoqo ngenyanga okanye ngekota, kwaye omnye umnikeli wesidoda akazukuhlangana nomntwana de abe neminyaka elishumi elinesithandathu. Ekugqibeleni, kuxhomekeke kulowo unikeleyo kunye nabazali abaza kuvuma ngoku kunye.
Inkxaso yomntwana. Xa kuchazwe ngokucacileyo kwisivumelwano somnikeli ukuba umnikeli unikela kuphela ngembewu yakhe kubazali ekujongwe kubo, oko kukuthi, ayithethi nto ngaphandle kokuyenza ifumaneke ukuze kungeniswe amadlozi angengowamvelo, umnikeli akanyanzelekanga ukuba ahlawule inkxaso-mali yomntwana. Emva kwayo yonke loo nto, kwimeko enjalo akangobameli be-causative. Ukuba oku akunjalo, kunokwenzeka ukuba umnikeli abonwe njenge-arhente yezizathu kwaye atyunjwe njengotata osemthethweni ngokuthatha amanyathelo katata, oya kunyanzeleka ukuba ahlawule isondlo. Oku kuthetha ukuba isivumelwano somnikeli asibalulekanga kuphela kubazali (abazali) ekujoliswe kubo, kodwa ngokuqinisekileyo nakumnikeli. Ngemvumelwano yomnikeli, umnikeli angangqina ukuba ungumnikeli, eqinisekisa ukuba lowo uza kuba ngumzali (abazali) akasayi kuba nakho ukufuna isondlo.
Uyilo, ukujonga okanye ukuhlengahlengisa isivumelwano sabanikeli
Ngaba sele unesivumelwano sokunikela kwaye ngaba kukho iimeko eziguqukileyo kuwe okanye kumnikeli? Emva koko kunokuba bubulumko ukulungelelanisa isivumelwano somnikeli. Cinga ngohambo oluneziphumo kwilungiselelo lotyelelo. Okanye utshintsho kumvuzo, olufuna ukuba uphononongo lwesondlo. Ukuba uyasitshintsha isivumelwano ngexesha kwaye wenze izivumelwano ezixhaswa ngamaqela omabini, wandise ithuba lobomi obuzinzileyo noxolo, hayi wena kuphela, kodwa nangenxa yomntwana.
Ngaba iimeko zihlala zinjalo kuwe? Nangona kunjalo kunokuba bubulumko ukuba isivumelwano sakho somnikeli sihlolwe yingcali yezomthetho. Nge Law & More Siyaqonda ukuba yonke imeko yahlukile. Kungenxa yoko le nto sithatha indlela yobuqu. Law & MoreAmagqwetha ziingcali kumthetho wosapho kwaye banokuphonononga imeko yakho kunye nawe kwaye bagqibe ukuba ngaba isivumelwano somnikeli sikulungele na ukulungiswa.
Ngaba ungathanda ukwenza isivumelwano somnikeli phantsi kwesikhokelo segqwetha lomthetho losapho? Nalapho Law & More ikulungele. Amagqwetha ethu anokukubonelela ngoncedo lwezomthetho okanye iingcebiso kwimeko yengxabano phakathi kwabazali ekujongwe kubo kunye nomnikeli. Ngaba unayo nayiphi na imibuzo ngesi sihloko? Nceda unxibelelane Law & More, siya kukuvuyela ukukunceda.
Post edlulileyo Ukutshintshwa kokuqhutywa
Post Next Ukulawula kwimeko yemozulu ngokuchasene neShell